Archive de l'auteur | NewsMada | Page 823
Hanao amboletra eny amin’ny 13 mey ny AFP : handray ny fepetra sy hisambotra avy hatrany ny Emmo/Reg
Par Taratra sur 18/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Raha efa nilaza fa tsy hihemotra amin’ny fikasany hidina an-dalambe hamory vahoaka etsy amin’ny kianja 13 mai, rahampitso, ny Antso ho fanavotam-pirenena (AFP), nampitandrina ny handray fepetra, hisambotra avy hatrany ary hampiasa ny hery eo am-pelatanany kosa ny Emmo/Reg. Inona no hiseho rahampitso ? « Baiko sy toromarika avy amin’ny prefet ary hampiharin’ny Emmo/Reg ny hanakanana […]
Par Taratra sur 17/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tsy nisy niangana mihitsy ireo atleta malagasy niatrika ny Lalao olympika (JO 2016). Resy teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona avokoa mantsy izy rehetra. Tsy afaka niatrika ny fifaninanana akory aza i Ali Kame. Tsy manana solontena mifaninana any amin’ny Lalao olympika intsony i Madagasikara. I Ali Kame, niatrika izany farany, teo amin’ny 110 m misy […]
Atletisma – 60 taon’ny Cnaps : navitrika ny mpifaninana tany Toamasina
Nitohy tany Toamasina ny hazakazaka, fankalazana ny faha-60 taon’ny Cnaps. Fihaonana, natao ny asabotsy lasa teo. Navitrika ny mpandray anjara satria nahatratra 576 ireo nisoratra anarana, tamin’ny halaviran-dalana 5 km. Voalohany teo amin’ny hazakazaka ho an’olon-tokana lehilahy i Todilahy Joseph, nahavita ny halavirana tao anatin’ny 14 mn 40 s. Faharoa i Pierre, 15 mn 18 […]
Tranompokonolona Analakely : hifanampy amin’ny fanamboarana azy ny FMTM sy ny CUA
Par Taratra sur 17/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Hiara-hientana amin’ny fanamboarana ny Tranompokonolona Analakely ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny Federasion’ny mpanao teatra eto Madagasikara (FMTM). Izay no tapaka nandritra ny fihaonan’izy ireo, omaly, araka ny nambaran-dRavaloson Mbato. Ny zoma teo, tonga nanamboatra sy nanolo ireo lamban-tsehatra ao amin’ny Tranompokonolona Analakely ny mpikambana ao amin’ny FMTM. Nandritra izany asa izany anefa, nianjera […]
« Herinandron’ny kabary » 2017 : hatao any Toamasina
Tontosa tany Mahajanga ny faran’ny herinandro teo ny « Herinandron’ny kabary » 2016. Raha ny vaovao tapaka nandritra ity hetsika karakarain’ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy (Fimpima) isan-taona ity, any Toamasina indray no hanatanterahana ny « Herinandron’ny kabary » amin’ny 21 ka hatramin’ny 27 aogositra 2017. Fanapahan-kevitra niraisan’ny rehetra ihany koa ny hamoahana boky iombonana ho an’ny fampianarana kabary. « Natokana ho […]
«Festival Kanetibe 2016» : nahitana talenta vaovao ny fihaonana
Par Taratra sur 17/08/2016 Divers, NS Malagasy
Tontosa, ny faran’ny herinandro lasa teo tetsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ny andiany faharoa amin’ny «Festival kanetibe 2016». Tonga maro ireo mpifaninana, izay nahitana mpilalao avy any amin’ireo fokontany sy ireo faritra samihafa. Niakatra ny lentan’ny fihaonana satria nahitana mpifaninana tsy mbola fantatra anarana nefa manana ny fahaiza-manaony ary nanozongozona ireo efa kalaza. Tsara ny […]
« Andriamanitra ô, inona indray ary ity ? » : hoentiny an-tsehatra ny 26 taona naha Turbo an’i Francis…
« Andriamanitra ô, inona ary ity ? », ny lohatein’ilay seho nataon’i Francis Turbo farany, tetsy amin’ny CCEsca Antanimena. Fantatra fa hiakatra amin’ny sehatra bebe kokoa, satria nisafidy an’Antsahamanitra indray izy, mba hanomezana fahafaham-po ireo mpankafy nangataka izany. « Andriamanitra ô, inona indray ary ity ? » ny lohatenin’ny seho, izay hotontosain’i Turbo, ny alahady 21 aogositra izao, manomboka amin’ny 2 […]
Tanora tsy tara – Mandritra ny fialan-tsasatra : maro isafidianana ny fialamboly azo atao…
Par Taratra sur 17/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Efa tafiditra tanteraka ao anaty fialan-tsasatra ny rehetra, ankehitriny. Efa vita ihany koa ny fanalana azy noho ny fanadinana natrehina. Roso ary ny dia ho amin’ny fialamboly sy ala vonkina. Mafy ihany iny taom-pianarana iny ka mila izany ny rehetra. Tsy tara amin’ny filalaovana « playstation » raha ny tanora, hatramin’ny ankizy aza. Maharaka ny hiaka farany […]
Par Taratra sur 17/08/2016 En Bref, NS Malagasy
Nanambara ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fa efa tonga eto amintsika ny andiany voalohany amin’ny solomaso fiarovana ny maso hijerena ny éclipse ny 1 septambra ho avy izao. 700 000 ny isan’ny solomaso haparitaka amin’ny farmasia sy ny toeram-pivarotana fanafody (depôt de médicament) any ambanivohitra. Tsy tokony hihoatra ny 2 000 Ar ny vidin’ny solomaso iray. Hahazo vata […]
Vehivavy 7 amin’ny 10 voavono : hisy ny ivontoerana handraisana ny mpanao herisetra
Tsy manosika ny fiarahamonina (lehilahy) hanao herisetra amin’ny vehivavy ny kolontsaina malagasy azo tarafina amin’ny ohabolana sy ny ohapitenenana maro momba ny fifandraisan’ny lahy sy ny vavy, araka ny valin’ny fikarohana nataon’ny mpisehatra ao anatin’ny tetikasa sahala iarahana amin’ny ONG Capacity building For Communities (CForC). Ny fandikana izany ohabolana izany no samy manana azy ny […]
CUA : nankasitrahana ireo mpamafa lalana 500
Notsimbinina manokana ireo mpamafa lalana ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny asabotsy teo. Nampisakafoan’ny ben’ny Tanàna Ravalomanana Lalao izy ireo ary nizarana yaourt sy paty. Nisy rahateo ny fiaraha-miasa tamin’ny orinasa AAA Magro tamin’izany. Mendrika ka nankasitrahana ireo mpiasa tena manatanteraka ny asa fanadiovana ny Renivohitra. 500 mahery ireo mpamafa lalana mahafatra-po amin’ny asany andavanandro […]
Reniranon’i Betsiboka : fahasahiranana lehibe ny famoaham-bokatra
Par Taratra sur 17/08/2016 Economie, NS Malagasy
Manahirana ny mponina, indrindra ireo mpamboly sy mpanangom-bokatra any amin’ny faritra Boeny ny fitaterana manaraka ny reniranon’i Betsiboka. Nanomboka ny taona 2000, simba avokoa ireo toerana fiantsonan’ny sambo mpitatitra olona sy entana. Fahasahiranana lehibe ny famoaham-bokatra mankany Marovoay avy any amin’ny kaominina Madirovalo, Manaratsandry, Maroala, Ambalatany, noho ny fahasimban’ny seranana fiantsonana any amin’ireo toerana ireo. […]
Andapa : tsy voafehin’ny VOI ny fiarovana ny ala
Mahery vaika ny kolikoly ao amin’ny faritra arovana tantanan’ny Vondrona olona ifotony (VOI) any Andapa, ao anatin’ny tandavanala Marojejy, Tsaratanàna, Anjanaharibe Atsimo (Comatsa). Maro ny voasoloky ary miafara amin’ny ady tany avy eo. Ao anatin’ny tandavanala Comatsa ny any Antokobe Belambo, kaominina Ambodiangezoka, distrika Andapa, faritra Sava. Miditra any anaty faritra arovana, indrindra ny tantanan’ny […]
Fikaroham-bahaolana : hihaona amin’ny FFKM i Chissano
Par Taratra sur 17/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Raikitra indray ny fakan-kevitra iarahana amin’ny Sadc. Anisan’ny nivoitra tamin’ny fandraisan’ny filoha Rajaonarimampianina ny mpanelanelana Chissano teny Iavoloha, omaly ny tombana ataony momba ny raharaham-pirenentsika. Fantatra tamin’izany fa hihaona amin’ny eo anivon’ny FFKM ny tenany. Anisan’ny nanao ny dingan’ny fampihavanana rahateo ny fiangonana. Hanontany ny tohin’izany ny Sadc ? Eo koa ny ho fihaonany amin’ireo filoha […]
Fitsarana manokana ara-toekarena, vola, hetra : “Mety hiteraka krizy ny volavolan-dalàna”, hoy ny Rohy
Mbola olana amin’ny fandanian-dalàna koa ny momba ny fitsarana manokana hisahana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra. Tsipahin’ny hetsika Rohy… “Tsy mankato io volavolan-dalàna io izahay, fa mety hiteraka krizy. Amin’izao tsy fahasalaman’ny fitsarana izao, omena fitsarana manokana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra. Tsy mety io.” Fanehon-kevitry ny avy amin’ny firaisamonina sivily hetsika Rohy, Ramarosaona Faraniaina, […]
Synoda any Antsirabe : mety hofidina filoha lefitry ny FJKM Rajaonarimampianina
Hanomboka anio ary haharitra herinandro any Antsirabe, ny synoda faha–XVIII eo anivon’ny FJKM. Anisan’ny hanamarika izany ny hirosoana amin’ny fifidianana ireo birao handrafitra ny fitantanana eo anivon’ity fiangonana ity, ho amin’ny efa-taona manaraka. Manomboka mahazo vahana any anivon’ireo kristianina sy anarana mandehandeha amin’izao fotoana izao ary ho filoha lefitra, ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Efa nilaza ny […]
Toamasina : tovolahy iray indray matin’ny fitsaram-bahoaka
Tovolahy iray tokony ho 25 taona indray no matin’ny fitsaram-bahoaka, ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo, tao amin’ny fokontany Analankininina hopitaly be Toamasina, carreaux faha 6 parisela 12/21-22. Raha ny loharanom-baovao, niditra an-keriny tao an-tokantranon’ olona iray vao vita vato ity tovolahy ity, ary efa narahin’ ireo fianakaviana maso akaiky. Nitety ny efitrano isan-karazany izy […]
Nosy Be : teratany seychellois 4 tratra nitondra rongony
Tratran’ny polisin’ny Paf (Police de l’air et de frontière) Nosy Be, nitondra rongony “goudron” milanja 1kilao sy sasany, ny teratany seychellois miisa efatra, handeha ho any Seychelles ny alahady teo. Rongony amin’ny karazany antsoina hoe “goudron” na fonosan-drongony hosorana menaka azo avy amin’ny rongony ihany fa marihitra miloko mainty izy io, izao tratra izao. Araka […]
Kolikoly : entana 285 kaontenera an-tsokosoko
Lazaina fa vary avy any India! Niakatra tany amin’ny fampanoavana, omaly 16 aogositra ny raharaha kolikoly avo lenta amin’ny fanafarana entana tsy mazava tany Toamasina. Voarohirohy amin’izany ny orinasa tsy miankina iray, nilaza fa vary fotsy avy any India ireo nohafarana, nefa lafarinina sy siramamy tao anaty kaontenera miisa 285, ny volana aogositra 2015. Manodidina […]
Ambohijanahary Antehiroka : tratran’ny zandary ireo roa lahy namono vazaha frantsay
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana, afakomaly teny Ambohijanahary Antehiroka sy Morarano Alarobia ireo jiolahy roa tompon’antoka tamin’ny famonoana vazaha frantsay teny Ambohibao, ny 23 desambra 2014… Noraisim-potsiny ireo jiolahy roa voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana teratany frantsay antsoina hoe Philippe Bertrand teny Morondava Ambohibao tamin’io fotoana io. […]
Ankazobe : dahalo iray lavon’ny zandary, basy maromaro tratra
Basy Kalachnikov iray miaraka amin’ny bala miisa 15, basim-borona iray sy basy lava vita gasy iray ary fanamiana miaramila miaraka amin’ny moara no azon’ny zandary nandritra ny fifandonana tamin’ny dahalo tao Maromandia, kaominina Antakavana, tokony ho 120 km miala ny distrikan’Ankazobe. Araka ny fanazavana voaray, nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana nataon’ny zandary ao amin’ny vondron-tobim-paritry […]
Hiala nenina. « Miantso ny filohan’ny Repoblika tsy mbola hampanan-kery ny lalàna mifehy ny fifandraisana, ary hamerina azy eny anivon’ny parlemanta mba handinihana azy indray, araka ny fahefana omen’ny lalàmpanorenana azy izahay”, hoy ny fanambaran’ny mpanao gazety, omaly tetsy Antsakaviro. Nohamafisin’izy ireo ny finiavana sy ny fahavononana handray anjara amin’ny resaka sy ny adihevitra rehetra ilaina […]
Par Taratra sur 17/08/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
«Iny lalana iny». Nalaza izany tononkira izany tamin’ny andron’ny Tetezamita. Iza tokoa ny tsy hahatsiahy fa nanana ny torolalany sy ny sori-dalany manokana ireo mpikambana tao amin’ny Tetezamita, fony tamin’ny androny? Dia nalaza ho azy teo ny «Iny lalana iny», tononkira anankiray nampalaza ihany koa ilay tarika mpanao zafindraony avy ao atsimotsimo ao! Toa nahazo […]
Tratran’ny zandary sy ny fokonolona… : nokaramaina 30 tapitrisa Ar ireo roa lahy mpangalatra lakolosy
Par Taratra sur 17/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Ny fiaraha-mientan’ny zandary sy ny fokonolona ao amin’ny kaominina Alarobia, distrikan’i Manjakandriana no nahatrarana ireto roa lahy mpangalatra lakolosim-piangonana tao an-toerana, ny alahady 14 aogositra 2016 teo. Volabe, satria 30 tapitrisa Ar be izao ny voalaza fa nanaramana azy ireo tamin’izao asa ratsy izao… Tsy hoe mitaona sy/na mampirisika ny olona hangalatra fa tena […]
Volley – Can U18 F : tsy handray anjara i Seychelles, vonona i Madagasikara
Par Taratra sur 16/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Raikitra. Hotanterahina eto Madagasikara, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny 19 – 22 aogositra izao, ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja volley, sokajy U18 zazavavy. Raha ny fampitam-baovao farany, ekipa sy firenena efatra (Madagasikara, mpampiantrano, Egypte, Algérie ary Maorisy) no hiady toerana amin’ity indray mitoraka ity. Tsy handray anjara tampoka amin’ity hetsika i […]
« Précédent 1 … 821 822 823 824 825 … 1 016 Suivant »